Sanatar Cabdi-qeybdiid oo ku baaqay in la dhameystiro dastuurka ku meel gaarka – Kalfadhi
Sanatar Cabdi-qeybdiid oo ku baaqay in la dhameystiro dastuurka ku meel gaarka
Kulanka 4 aad ee madashada Guddiyada Dastuurka heer federal iyo Dowladaha xubnaha ka ah DFS Ayaa looga doodayaa 5-ta cutub ee ugu danbeeyay ee ay soo diyaariyeen Guddiga Dib u eegista Dastuurka ee labada Aqal ee Baarlamanka Soomaaliya, & Guddiga Madaxa banaan ee Dib u eegista Dastuurka Soomaaliya.
Cabdi xasan Cawaale Qayb-diid oo ah Guddoomiyaha Guddiga lasocodka iyo dib u eegista hirgalinta dastuurka Soomaaliya ayaa ku baaqay in uusan noqon kulan la isugu yimaado oo kaliya ee uu noqdo mid miradhal ah oo dan u ah Umadda Soomaaliyeed, isagoo sidoo kale oga mahadnaqay Doorka ay dowlad goboleedyadu ka qaateen In la dhameystiro 15-ka cutub ee kamid ah Dastuurka Dalka.
Sidoo kale Cabdi Qeyb-diid ayaa sheegay in Dowlad goboleedyada ay u gudbiyeen 10-kii cutub ee hore, oo dib u eegista lagu sameeyay balse uusan jirin Hal dowladda goboleed oo ilaa hadda ka soo jawaabay, wuxuuna ku baaqay in laga qeybqaato dhameystirka Dastuurka
Gudoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha wakiilada jubaland Aadan khaliif ayaa kamahadceliyay shaqada ay soo qabteen labada guddi ee Baarlamanka iyo Kuwa Madaxa bananan, Dhankeeda Muumina Sheikh Cumar oo ah guddoomiye ku xigeenka Guddiga Madaxa banana ee Dastuurka Soomaaliya ayaa ku baaqday in dowlad goboleedyadu ay soo da-dajiyaan ansixinta Cutubyada ay soo diyaariyeen Guddiyadan.
Cabdixakiin Maxamed Axmed (Dhoobo-Daareed) oo ah Guddoomiyaha Golaha Wakiilada ee Puntland oo daah furay kulankan ayaa sheegay iney Puntland ka go’antahay sidii loo dhameystiri lahaa dastuurka qabyada ah ee Soomaaliya wuxuuna sidoo kale ku taliyay in la badiyo la tashadiya lala sameynayo bulshada rayidka ah.
Shirkaan oo socon doona muddo Sadex cisho ah ayaa sidoo kale la filayaa in wada tashiyo lagala sameeyo bulshada rayidka ah ee ku dhaqan deegaanada Puntland qaarkood.
Yuusuf Cabdi Shire, Garoowe.
Guddiga dib u eegista dastuurka ee baarlamaanka oo ku shiraya Garoowe
Guddoomiyeyaasha Baarlamaanadda Jabuuti iyo Soomaaliya oo sameysanaya guddi-Saaxiibtinnimo